Wararka Maanta: Sabti, Jan 19, 2013-Qaramada Midoobay oo si adag u Cambaareysay kufsiga iyo Guurka khasabka ah ee lagula kaco Haweenka Soomaaliyeed
Wakiilka gaaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha ku saleysan kufsiga, Zainab Hawa Bangura oo wareysii siinaysay VOA-da ayaa sheegtay in sannadkii hore ay diiwaan-geliyeen 100-kiis oo ku saleysan kufsiga haweenka Soomaalida, taasoo ay baaritaanno ku hayaan.
“Wararka aan ka helayno Soomaaliya waxay muujinayaan inuu kufsi ka jiro xeryaha ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah, taasina walaac xooggan ayay nagu haysaa,” ayay tiri Zainab Bangura.
Wakiilku waxay sheegtay in kufsiga uu ka mid yahay dambiyada dagaalka ee dunida ka dhaca, ciddii gashana aysan ka baxsan doonin sharciga. “Kufsigu waa dambi dagaal ciddii gashana lagama harayo meel walba oo ay gasho.”
Mar su’aal laga weydiiyay sida ay u aragto kiiska ku saabsan haweeney la kufsaday oo la xiray iyo wariyihii warbixinteeda dibadda soo dhigtay oo isna xabsiga ku jira ayay ku jawaabtay:
“Ma rumeysannin in la xiro wariye ama qof la dhiibaateeyay, waayo waxaan u aragnaa taas in loola jeedo in la qariyo dhibaatooyinka haweenka loo geysto, balse innagu waxaan ku tiirsanaan doonnaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay suxufiyiinta ku jiraan si aan wax uga ogaanno dhibaatada ku saabsan jinsiga ee haweenka loo geysto.”
Haweeneydan ayaa sheegtay inay sannadkan dhammaadkiisa tegi doonto magaalada Muqdihso si ay uga qaybqaadato baaritaannada lagu sameynayo kufsiga haweenka loogu geysto Soomaaliya.
Sidoo kale, Zainab Bangura waxay sheegtay in booliiska iyo garsoorka oo ay ku eedeysay inaysan u marin habkii la doonayay in loo baaro arrintan, iyadoo xustay in xafiiskiisa uu diyaar u yahay inay tababarro siiso ciidamada booliiska, kuwaasoo ku saabsan habka loo baarayo dambiyada noocan oo kale ah.
“Waxaan ka filaynay ciidamada booliiska inay baaritaanno ku sameeyaan xad-gudubyada ku saleysan jinsiga ku saleysan ee ka dhaca goobaha ay colaaduhu ka jiraan, waxaana ka filaynaa in garsoorka uu dacwad kusoo oogo ciddii lagu caddeeyo dambiga uu xafiiskeedu u gudbin doonaan gala maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada,” ayay tiri Bangura.
Sarkaaladdu waxay sheegtay inaan la aqbali karin in dowlad Qaramada Midoobay ka tirsan ay xirto wariye daah-rogay fal kufsi oo dambi ah iyo qofkii la dhibaateeyay midna halkii ay ahayd in dowladdu ay ka faa’iideysato arrintaas oo ahayd howl iyada u taallay balse loosoo bandhigay.
Dhanka kale, Zainab Bangura waxay ka hadashay dhibaatooyin loo geysto haweenka ee ka dhaca deegaannada ay Al-shabaab ka taliso, kuwaasoo ay ka mid yihiin guurka khasabka ah, iyadoo sheegtay in arrimahaas ay baaris ku hayso.
“Waxaan helnay warbixinnada noocan oo kale ah, baaris ayaana ku haynaa waxaana ku kalsoonnahay inaan soo bandhigi doonnaa magacyada kuwa geystay ama ku kacay falalkaas, mana baxsan doonaan,” ayay tiri Bangura oo intaas ku daray in kuwa dambiyadan ay ku caddaato ay horgeyn doonaan maxkamadda calaamiga ah ee dambiyada.
“Xafiiskeennu wuxuu awood u leeyahay inuu kuwa dambiyada ka dhanka ah haweenka ee kufsiga iyo guurka khasabka ah uu bulshada dhexdeeda ku ceebeyn karo,” ayay tiri Wakiilka gaaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha ku saleysan kufsiga.
Ugu dambeyn, haweeneydan waxay ugu baaqday haweenka Soomaalida oo muddo badan dhibaatooyin lagu hayay ay ogaadaan inay garab-taagan yihiin oo aysan meel cidlo ah joogin, iyadoo ka dalbatay inaysan aamusin oo ay si cad u sheegaan kuwa dhibaatooyinka u geysanaya.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii November ee sannadkii hore ka sheegay Muqdisho in askarigii kufsi u geysta haweeney ay ciqaabtiisu noqon doonto dil toogasho, iyadoo maalmo ka horrna dil lagu fuliyay askari kufsi u geystay haweeney rayid ah.
“Ciribtirka kufsiga wuxuu kaalinta hore kaga jiraa siyaasadda dowladda aan hoggaaminayo,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo ka jawaabay su’aal arrintaas ku saabsan oo lagu weydiiyay waddanka Mareykanka oo uu booqasho ku joogo, isagoo intaas ku daray inay dhammaatay xilligii isla-xisaabtan la’aanta.
Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo uu xabsiga ku jira wariye soo tabiyay warbixin ku saabsan haweeney u sheegtay inay kufsadeen tiro ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya, iyadoo dowladduna ay arrintan ku tilmaamayso been la dhoodhoobay.